အဘယ်ကြောင့် PCB ထုတ်လုပ်သူများစွာသော 2021 ခုနှစ်တွင်စျေးနှုန်းမြှင့်?
အဘယ်ကြောင့် PCB ထုတ်လုပ်သူများစွာသော 2021 ခုနှစ်တွင်စျေးနှုန်းမြှင့်? PCB စျေးနှုန်းများမြင့်တက်ရခြင်းအကြောင်းအရင်း။ ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် - ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင်ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးသည် ...
အက်ပဲလ်၏ယခင်နည်းပညာဆိုင်ရာတီထွင်မှုများက PCB လုပ်ငန်းနယ်ပယ်ကိုပြန်လည်ဖွဲ့စည်းရန်အတွက်ကြီးမားသောအခွင့်အလမ်းများရရှိခဲ့သည်။ iphone 8 သည် carrier boards ကဲ့သို့နည်းပညာအသစ်များကိုမိတ်ဆက်ပေးလိမ့်မည်၊ ထို့ကြောင့် motherboard တော်လှန်ရေးအသစ်ကိုစတင်မည်ဖြစ်သည်။ ကုန်ပစ္စည်းလိုင်းပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်းသည်နောက်ကျောနှင့်ထပ်နေသည်။
Kaisheng သည် ၂၀၁၆ ခုနှစ်ပေးသွင်းသူကွန်ဖရင့်ကိုအောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ခဲ့သည်
Kaisheng ၏ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်စီမံခန့်ခွဲမှု၏အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်သော“ Win-Win ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုသည်ကမ္ဘာကြီးကိုအကျိုးပြုသည်။ “ ရန်သူ၏ခိုင်ခံ့သောသွားလာမှုသည်သံနံရံတစ်ခုနှင့်တူသော်လည်းခိုင်မာသောခြေလှမ်းများဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်း၏ထိပ်သီးကိုအောင်နိုင်နေပြီ” အဟောင်းကိုစွန့်ခွာပြီး 2016 ကိုအသစ်သောကြိုဆိုခြင်းအခါသမယတွင် ...
2017 ၏ပထမငါးလတွင် IC ထုတ်လုပ်မှုသည်တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် ၂၅.၁% တိုးတက်ခဲ့သည်
စက်မှုနှင့်သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာ ၀ န်ကြီးဌာနမှထုတ်ပြန်သော ၂၀၁၇ ခုနှစ်ဇန်နဝါရီမှမေလအထိအီလက်ထရောနစ်သတင်းအချက်အလက်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်း၏လုပ်ဆောင်မှုအရအီလက်ထရွန်နစ်အစိတ်အပိုင်းများထုတ်လုပ်မှုသည်ပုံမှန်တိုးတက်မှုကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားပြီး၊
“ AAA Credit Enterprise” ချီးမြှင့်ခံရခြင်းအတွက် KAISHENG အားဂုဏ်ယူပါတယ်
၂၀၁၉ ခုနှစ်ဇွန်လ ၂၁ ရက်နေ့တွင် SHENZHEN KAISHENG PCB CO ။ , LIMITED ၏ China rating အကဲဖြတ်အဖွဲ့က AAA ကိုအဆင့်သတ်မှတ်ခဲ့သည်။
အပြင်းအထန်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာယှဉ်ပြိုင်မှုဖိအားပေးမှုနှင့်လျင်မြန်စွာနည်းပညာပြောင်းလဲမှုများနှင့်ရင်ဆိုင်ရသောအခါတရုတ်၏ပုံနှိပ်ဘုတ်လုပ်ငန်းသည်ပိုမိုမြင့်မားသောအဆင့်များနှင့်အောင်မြင်မှုများရရှိရန်ကြိုးပမ်းနေသည်။ Printed circuit board ထုတ်လုပ်သူများကိုအဓိကအားဖြင့်တရုတ်၊ တိုင်ဝမ်၊ Japa အပါအဝင်ဒေသကြီးခြောက်ခုတွင်ဖြန့်ဝေသည်။
PCB နည်းပညာအတွက် 5G စိန်ခေါ်မှုများ
၂၀၁၀ ခုနှစ်မှစ၍ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ PCB ထုတ်လုပ်မှုတန်ဖိုးတိုးတက်မှုနှုန်းသည်ယေဘုယျအားဖြင့်ကျဆင်းခဲ့သည်။ တစ်ချက်တွင်မြန်ဆန်စွာကြားဖြတ် terminal terminal အသစ်များသည်နိမ့်ကျသောထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်ကိုဆက်လက်သက်ရောက်သည်။ တစ်ချိန်က output တန်ဖိုးအရပထမနေရာ၌ရှိခဲ့သည့် single နှင့် double panels များသည်အဆင့်မြင့် pro များဖြင့်တဖြည်းဖြည်းအစားထိုးခံရသည်။